Georgia waxay khatar ku tahay booqdayaasha kibirka ee LGBTQ: UNWTO SG oo reer Georgia ah wax faallo ah kama bixin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » LGBTQ » Georgia waxay khatar ku tahay booqdayaasha kibirka ee LGBTQ: UNWTO SG oo reer Georgia ah wax faallo ah kama bixin
Jebinta Wararka Yurub • Georgia War Cusub • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • LGBTQ • News • Dadka • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dalxiiska macnihiisu waa nabad, faham caalami ah iyo in la baaro dhaqamo kale. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay sinnaan iyo dulqaad. Jamhuuriyadda Georgia waxay muujisay faham yar kadib markii sawir qaade si xun u dhaawacay markii uu tabinayay joojinta Gay Pride rabshada darteed.
Kibirku maahan oo kaliya dhaqdhaqaaq caalami ah oo bulshada LGBTQ ay isugu imaato oo ay muujiso calanka, xaflada, hadalka, iyo baashaal, sidoo kale waa munaasabad weyn oo dalxiis oo ka dhacda dalal badan oo adduunka ah.
Jamhuuriyadda Georgia, boqolaal ayaa isugu soo baxay caasimadda, Tbilisi, Axaddii ka dib dhimashadii Alexander Lashkarava, mid ka mid ah saxafiyiin badan ayaa la weerarey markii kooxo rabshado wata ay weerareen xafiiska ololaha ee LBGT +, taas oo kalliftey dhaqdhaqaaqayaasha in ay joojiyaan Dabaaldega Kibirka ee waddankan ka dhaca.
Qofka mas'uulka ka ah Ururka Dalxiiska Adduunka, Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ma uusan rabin inuu ka hadlo dhibaatadan Georgia. Zuraab waxay ka timid Georgia.
IGLTA waa xubin xiriir la leh UNWTO, Ururka Dalxiiska Adduunka.
UNWTO waxay leedahay xoghaye guud oo ka socda Jamhuuriyadda Georgia oo aan rabin inuu ka hadlo xaalad carqalad ah oo ka jirta dalkiisa ka dib markii xubno ka tirsan bulshada LGBTQ la weeraray, taas oo ku qasabtay joojinta Gay Pride, safar iyo dalxiis cajiib ah dalal badan.
Dagaal gacan ka hadal ah ayaa ka dhacay baarlamaanka Georgia maalintii Isniinta iyadoo saxafiyiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ay isku dayeen inay galaan aqalka hoose iyagoo ka mudaaharaadaya geerida sawir qaade la garaacay intii lagu jiray rabshadihii ka dhanka ahaa dhaqdhaqaaqayaasha LGBT usbuucii hore.
Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay caasimada Tbilisi maalintii Axada kadib dhimashadii Alexander Lashkarava, oo ka mid ahaa dhowr saxafi oo si xun u dhaawacmay markii kooxo rabshado wata ay weerareen xafiiska ololaha ee LBGT +, taas oo keentay in dhaqdhaqaaqayaasha ay joojiyaan safarkooda hanka.
Waaxda Arimaha Dibada ee Mareykanka ayaa Talaadadii ku baaqday in xasillooni laga sameeyo jamhuuriyada Georgia kadib dhimashadii sawir qaade la garaacay intii ay socdeen rabshadaha ka dhanka ah dhaqdhaqaaqayaasha LGBT waxayna sheegtay in kuwa weeraray mudaaharaadayaasha nabada iyo saxafiyiinta in la maxkamadeeyo.
Afhayeenka wasaarada arimaha dibada Ned Price ayaa u sheegay warbixin kooban oo joogto ah in Washington ay la socoto xaaladda Georgia ayna ka go'an tahay inay aragto in kuwa mas'uulka ka ah lala xisaabtamo.
Badbaadada wariye kasta oo reer Georgia ah, iyo kalsoonida lagu qabo dimuqraadiyadda iyo Georgia, dhab ahaantii, waxay u baahan tahay in shaqsi kasta oo weeraray mudaaharaadayaasha nabada, iyo suxufiyiinta 5-tii iyo 6-dii July, ama kuwa huriyay rabshadaha, waa in la aqoonsadaa, waa inay noqdaan waa la qabtay oo waa la maxkamadeeyay ilaa sharciga inta uu gaarsiisan yahay, ”ayuu yiri Price.
“Waxaan xusuusineynaa hogaamiyaasha Georgia iyo sharci fulinta sharciga masuuliyada ka saran ilaalinta dhamaan kuwa ku dhaqmaya xuquuqdooda dastuuriga ah. Waxaan xusuusineynaa waajibaadkooda ka saaran ilaalinta suxufiyiinta adeegsanaya xorriyadda saxaafadda. ”